Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inopinda muchikamu che "Feature Freeze", iyo beta ichasvika muna Gunyana 27 | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inopinda muchikamu che "Feature Freeze", beta ichasvika musi waGunyana 27
Canonical's Steve Langasek akazivisa Chishanu chapfuura kuti chinotevera Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish yapinda zviri pamutemo muchikamu che "Feature Freeze" wekupedzisira Nyamavhuvhu 23.
Chikamu chakadaidzwa Isa Chidimbu . dzimwe nyaya dzinogona kuvharira kuburitswa kwekupedzisira.
Panguva ino Hapasisina maficha makuru achawedzerwa kana mapakeji achagadziridzwa, kunze kweavo vanogadzirisa madhiragi. Nekudaro, parizvino pane 870 mapakeji akamiswa munzvimbo yekuchengetera, saka vagadziri vanofanirwa kugadzirisa matambudziko avo uye voregedze mapakeji beta isati yaburitswa.
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish beta iri kuuya munaGunyana 27
Nekuuya kwechikamu cheFree Freeze, chinhanho chinotevera paUbuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish purogiramu yekuburitsa ndiko kuburitswa kweiyo beta vhezheni ine zuva rakabvumiranwa munaGunyana 27, 2018 uye ichave ichiwanikwa paUbuntu uye zviri pamutemo kugoverwa.
Ubuntu 18.10 ndeyekutanga Canonical kuburitswa kuve neyakareruka budiriro kutenderera, inoumbwa nemavhiki akati wandei anonzi "Test Vhiki" uye imwechete beta yakaburitswa pamberi pekusunungurwa kwekupedzisira kunorova mumigwagwa muna Gumiguru 18.
Linux Kernel 4.17 ichauya kuUbuntu nekuburitswa kweshanduro iyi, pamwe neiyo nyowani yeGNOME 3.30 nharaunda, kusangana kweAroid, nyowani nyowani uye icon pack, uye new login screen, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inovimbisa zvirinani kuzvitonga manejimendi kwema laptops nekuda kweimwe kernel inogadzirisa iyo inodzima iyo USB kutonga uye mamwe madhiraivha kana isiri kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inopinda muchikamu che "Feature Freeze", beta ichasvika musi waGunyana 27
Yakanaka ruzivo, sezviri pachena Ubuntu iri kudzoka kuve huru sisitimu .. Yakanaka